မလေးရှားမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေ COVID-19 စစ်ဆေးမှု စတင်ပြီ
မလေးရှားနိုင်ငံ Klang မြို့မှာ ကိုဗစ်စစ်ဆေးဖို့ တန်းစီနေကြတဲ့ စက်ရုံ အလုပ်သမားတချို့။ (နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀)
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေရှိရာ နေရာတွေမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ စစ်ဆေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ စတင်နေတဲ့အကြောင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မအေးအေးမာက ပြောပြပေးပါမယ်။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ ရှိရာနေရာတွေကို အဓိကထားပြီး စစ်ဆေးတဲ့ အစီအစဉ်ကိုတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး ဒီကနေ့ပဲ စတင်လိုက်တာပါ။ ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတဲ့ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြားနေထိုင်နေကြပြီး ရောဂါကူးစက်မှု အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် အနီရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင် ဦးသန်းထွန်းကပြောပါတယ်။
“အဲဒါကတော့ ဆေးစစ်မှာဗျ။ စက်ရုံတွေ၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ များတဲ့နေရာတွေ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေကို ဆေးစစ်မှာ ပီနန်းလည်း ပါတယ်၊ ကွာလာလမ်ပူလည်း ပါတယ်၊ ဆလန်ဂေါလည်း ပါတယ်။ အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်ပေ့ါ၊ အနီရောင်ဇုန်နယ်မြေပေါ့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနီရောင်နယ်မြေပေါ့။”
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရှိရာ ကွာလာလမ်ပူ၊ ဆလန်းဂေါ၊ ပီနန် အပါအ၀င် ရောဂါကူးစက်မှု အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နယ်မြေတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က စ စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး ဆာဘား၊ နီဂရီ ဆဲယ်ဘီလန်း ပြည်နယ် အပါအ၀င် ကျန်ဒေသတွေမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့က စ စစ်ဆေးပေးသွားမယ်လို့လည်း မလေးရှား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီး Saravanan Murugan ကို ကိုးကားပြီး ဒေသခံသတင်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။
Perak ပြည်နယ် Ipoh မြို့မှာလည်း စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကြား ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဒီကနေ့ကစပြီး သီတင်း ၂ ပတ်ကြာ အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ကြောင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင် ဦးသန်းထွန်းကပြောပါတယ်။
"၁၄ ရက်ပေါ့။ ၂ ပတ်ပေါ့၊ ရပ်ကွက်တခုပဲ အိပို့ပြည်နယ် ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့ ထိ ၂ ပတ်ပေါ့... Lock down လုပ်မှာ။"
သေဆုံးသူ ၃၆၀ ဦးနဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်သူ ၆၅,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ရှိရာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေကနေ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေ တိုးလာနေတာကြောင့် နိုင်ငံအ၀န်းက ခန့်မှန်းခြေ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ၁၇၀,၀၀၀ လောက်ကို စစ်ဆေးဖို့ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ခန့်မှန်းခြေ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား ၅၅၀,၀၀၀ လောက် ရှိနေပြီး ကပ်ရောဂါကာလ အလုပ်အကိုင်နဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သူ တချို့ရှိခဲ့သလို နေရပ်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မလေးရှားနိုငျငံမှာ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အပါအဝငျ နိုငျငံခွားသား အလုပျသမားတှရှေိရာ နရောတှမှော ကိုဗဈကပျရောဂါ စဈဆေးတဲ့ အစီအစဉျတှေ စတငျနတေဲ့အကွောငျးကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ မအေးအေးမာက ပွောပွပေးပါမယျ။
ကိုဗဈကပျရောဂါ ကူးစကျမှုတှေ မွငျ့တကျနတေဲ့ နိုငျငံခွားသား အလုပျသမားတှေ ရှိရာနရောတှကေို အဓိကထားပွီး စဈဆေးတဲ့ အစီအစဉျကိုတော့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့ အာဏာပိုငျတှေ ပူးပေါငျးပွီး ဒီကနပေဲ့ စတငျလိုကျတာပါ။ ရောဂါပိုးစဈဆေးတဲ့ အစီအစဉျမှာ မွနျမာနိုငျငံသား အမြားအပွားနထေိုငျနကွေပွီး ရောဂါကူးစကျမှု အန်တရာယျရှိတာကွောငျ့ အနီရောငျအဆငျ့ သတျမှတျထားတဲ့ နယျမွတှေလေညျး ပါဝငျတယျလို့ မလေးရှားနိုငျငံအခွစေိုကျ အလုပျအကိုငျရှာဖှရေေး အကြိုးဆောငျလုပျငနျးရှငျ ဦးသနျးထှနျးကပွောပါတယျ။
“အဲဒါကတော့ ဆေးစဈမှာဗြ။ စကျရုံတှေ၊ နိုငျငံခွားသား အလုပျသမားတှေ မြားတဲ့နရောတှေ၊ စကျရုံ အလုပျရုံတှကေို ဆေးစဈမှာ ပီနနျးလညျး ပါတယျ၊ ကှာလာလမျပူလညျး ပါတယျ၊ ဆလနျဂေါလညျး ပါတယျ။ အဲဒီ ပတျဝနျးကငျြပေ့ါ၊ အနီရောငျဇုနျနယျမွပေေါ့၊ သတျမှတျထားတဲ့ အနီရောငျနယျမွပေေါ့။”
မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ရှိရာ ကှာလာလမျပူ၊ ဆလနျးဂေါ၊ ပီနနျ အပါအဝငျ ရောဂါကူးစကျမှု အန်တရာယျရှိတဲ့ နယျမွတှေအေဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ နရောတှမှော ဒီဇငျဘာလ ၉ ရကျနကေ့ စ စဈဆေးမှာဖွဈပွီး ဆာဘား၊ နီဂရီ ဆဲယျဘီလနျး ပွညျနယျ အပါအဝငျ ကနျြဒသေတှမှော ဒီဇငျဘာ ၁၆ ရကျနကေ့ စ စဈဆေးပေးသှားမယျလို့လညျး မလေးရှား လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဝနျကွီး Saravanan Murugan ကို ကိုးကားပွီး ဒသေခံသတငျးတှကေ ဖျောပွကွပါတယျ။
Perak ပွညျနယျ Ipoh မွို့မှာလညျး စကျရုံအလုပျသမားတှကွေား ကိုဗဈကူးစကျမှုတှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီးနောကျ ဒီကနကေ့စပွီး သီတငျး ၂ ပတျကွာ အိမျပွငျမထှကျဖို့ အမိနျ့ထုတျလိုကျကွောငျး အလုပျအကိုငျရှာဖှရေေး အကြိုးဆောငျလုပျငနျးရှငျ ဦးသနျးထှနျးကပွောပါတယျ။
"၁၄ ရကျပေါ့။ ၂ ပတျပေါ့၊ ရပျကှကျတခုပဲ အိပို့ပွညျနယျ ဒီနေ့ ဒီဇငျဘာလ ၁ ရကျနကေ့နေ ၁၄ ရကျနေ့ ထိ ၂ ပတျပေါ့... Lock down လုပျမှာ။"
သဆေုံးသူ ၃၆၀ ဦးနဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါကူးစကျသူ ၆၅,၀၀၀ ကြျောရှိနပွေီ ဖွဈတဲ့ မလေးရှားနိုငျငံမှာ နိုငျငံခွားသားတှေ ရှိရာ စကျရုံ၊ အလုပျရုံတှကေနေ ကိုဗဈရောဂါပိုးကူးစကျမှုတှေ တိုးလာနတောကွောငျ့ နိုငျငံအဝနျးက ခနျ့မှနျးခွေ နိုငျငံခွားသား အလုပျသမား ၁၇၀,၀၀၀ လောကျကို စဈဆေးဖို့ မလေးရှား အာဏာပိုငျတှေ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ။
မလေးရှားနိုငျငံမှာ ခနျ့မှနျးခွေ မွနျမာနိုငျငံသား အလုပျသမား ၅၅၀,၀၀၀ လောကျ ရှိနပွေီး ကပျရောဂါကာလ အလုပျအကိုငျနဲ့ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျသူ တခြို့ရှိခဲ့သလို နရေပျပွနျဖို့ ကွိုးစားသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။